Ukusekela Windows 10 – Windows 10 help blog
helppane.exe UNcedo neNkxaso ka-Microsoft®
Ifayile yeHelpane.exe iyinxalenye yeComputer Platform Client yeenkqubo zeWindows. Inoxanduva lokubonelela ngoncedo nenkxaso. Ukuba uqale uqaliswe ngeWindows OS, iHelpane.exe idibaniswe kuyo kwaye isebenza kakuhle kwimeko yayo.
Ukuba uya kwiiMpahla, uya kubona ukuba inkqubo ye-helppane.exe idibene neNkxaso yeNkonzo yeMicrosoft kunye nenkxaso. Ukuba ucinezela iF1 kwikhibhodi yakho, iphepha leNkxaso yeMicrosoft iya kuvula.
Continue reading “helppane.exe UNcedo neNkxaso ka-Microsoft®”
Author SupportPosted on 22/12/2018 Categories UncategorizedLeave a comment on helppane.exe UNcedo neNkxaso ka-Microsoft®
winlogon.exe Usetyenziso lokuvula ii-Windows
winlogon.exe Usetyenziso lokuvula ii-Windows – yinkqubo enoxanduva lokuqala iseshoni nokungena i-logoff yomsebenzisi. Ifayile ye winlgon.exe ihlala ikhona kwiC: \_ Windows \_ System32.
Continue reading “winlogon.exe Usetyenziso lokuvula ii-Windows”
Author SupportPosted on 05/07/2018 Categories Windows 10Tags winlogon.exeLeave a comment on winlogon.exe Usetyenziso lokuvula ii-Windows
DataExchangeHost.exe I-Data Exchange Host
Continue reading “DataExchangeHost.exe I-Data Exchange Host”
Author SupportPosted on 17/06/2018 Categories Windows 10Tags DataExchangeHost.exeLeave a comment on DataExchangeHost.exe I-Data Exchange Host
mshta.exe I-Microsoft (R) nguMsebenzisi we-HTML
Continue reading “mshta.exe I-Microsoft (R) nguMsebenzisi we-HTML”
Author SupportPosted on 11/06/2018 Categories Windows 10Tags mshta.exeLeave a comment on mshta.exe I-Microsoft (R) nguMsebenzisi we-HTML
fumana inkxaso ngosetyenziso lomculo lwe-groove
Fumana uncedo ngosetyenziso lomculo lwe-Groove
Ngoncedo ngosetyenziso lwe-Groove, ngenisa umbuzo wakho kwibhokisi yokukhangela kwithaskbha. Uza kufumana iimpendulo ezisuka kwi-Cortana okanye i-Bing.
Author SupportPosted on 20/05/2016 20/05/2016 Categories Windows 10Tags Cortana, lomculo lwe-Groove, Windows 10, Windows 10 MobileLeave a comment on fumana inkxaso ngosetyenziso lomculo lwe-groove
kutheni i-cortana ingekho kwingingqi okanye ngolwimi lwam?
Author SupportPosted on 08/03/2016 Categories Windows 10Tags Cortana, Windows 10, Windows 10 MobileLeave a comment on kutheni i-cortana ingekho kwingingqi okanye ngolwimi lwam?
sisiphi isixhobo endimele ndisibhale kwingxelo yexbox yeklipu kwipc yam?
Continue reading “sisiphi isixhobo endimele ndisibhale kwingxelo yexbox yeklipu kwipc yam?”
Author SupportPosted on 05/03/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, XboxLeave a comment on sisiphi isixhobo endimele ndisibhale kwingxelo yexbox yeklipu kwipc yam?
indlela yokongeza ulwimi longeniso kwi-pc yakho
Author SupportPosted on 04/03/2016 04/03/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10Leave a comment on indlela yokongeza ulwimi longeniso kwi-pc yakho
iphi iprinta yam kwi-windows 10 mobile?
Awukwazi ukufumana iprinta yakho kuluhlu? Qinisekisa ilayitiwe yaye iqhagamshele kwinethiwekhi ye-Wi-Fi efanayo nefowuni yakho. Ukuba awukayifumani, jonga ukuba iprinta yakho iyahambelana ne-Windows 10 Mobile printa.
Author SupportPosted on 28/01/2016 28/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, Windows 10 MobileLeave a comment on iphi iprinta yam kwi-windows 10 mobile?
tshintsha ingingqi yakho kwivenkile ye-windows
Ukuba ufudukela kwilizwe okanye ingingqi eyahlukileyo, tsintsha isetingi yengingqi yakho ukuqhubeka uthenga kwiVenkile. Qaphela: Iimveliso ezininzi ezithengwe kwiVenkile yeWindows kwenye ingingqi eziyi kusebenza kwenye. Ezi ziquka i-Xbox Live Gold ne-Groove Music Pass, usetyenziso, imidlalo, umculo, iimuvi, nemiboniso ye-TV.
Continue reading “tshintsha ingingqi yakho kwivenkile ye-windows”
Author SupportPosted on 27/01/2016 27/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, Windows Store, XboxLeave a comment on tshintsha ingingqi yakho kwivenkile ye-windows